२५ दिनमा सकिएलात गौतमबुद्ध विमानस्थलको बाँकी काम ? - ParyatanBazar.com
२५ दिनमा सकिएलात गौतमबुद्ध विमानस्थलको बाँकी काम ?
मंसिर २४, काठमाडौं । निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवलोकन गर्न शनिबार भैरहवा पुगेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई आयोजनाको ९३ प्रतिशत पुरा भएको जानकारी गराइयो । मन्त्री भट्टराईले आयोजना प्रमुखसहित सरोकारवालालाई अबको २५ दिनमा बाँकी काम पूरा गर्न निर्देशन दिए । यो २५ दिन भनेको सन् २०२० मा बाँकी रहेको अवधि हो । यो आयोजनाको म्याद यही डिसेम्बर ३१ सम्म मात्र छ । शिलान्यासयता करिब आधा दर्जन पटक म्याद थप भएपछि तय भएको मिति हो यो ।
मन्त्री भट्टराईले दिएको निर्देशन आयोजनाले कति सहजै पालना गर्ला ? यसका लागि पछिल्ला दिनमा आयोजनामा भएको कार्य प्रगति हेर्नुपर्छ ।१९ असार २०७७ मा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रम ११ चैतदेखि १५ असारसम्मको कार्यसम्पादनको लामो सूची सार्वजनिक गरिएको थियो, जसमा भैरहवा विमानस्थलको कार्यप्रगति ९१ प्रतिशत देखाइएको थियो । मन्त्री भट्टराईलाई आयोजनाले दिएको जानकारी अनुसार अहिले कार्यप्रगति ९३ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थातः चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनाको अवधिमा आयोजनाको भौतिक प्रगति २ प्रतिशत भएको छ । त्यसो भए बाँकी २५ दिनमा ७ प्रतिशत कार्य प्रगति सम्भव छ ?
आयोजना नियाली रहेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरु यो सम्भव देख्दैनन् । प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थलमा उपकरण जडान गर्न बाँकी कामका लागि नेपालमा दक्ष प्राविधिक छैनन् । आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएका कम्पनीहरुले कोरोना महामारीका कारण चीन र थाइल्याण्डबाट प्राविधिक फर्काउन नसकेको जनाएका छन् । नेपाल सरकारले पनि नेपाली आयोजनामा काम गर्ने विदेशमा अड्किएका कामदार आउन सक्ने निर्णय गर्न ढिला गर्‍यो ।
प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार इन्जिनियरहरु आएर तत्काल काम सुरु गर्दासमेत तीन महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था छ । कतिपय सामान नै आउन बाँकी रहेका कारण विमानस्थल निर्माणको काम सकिने मिति तोक्न नसकिने प्रतिक्रिया आफूले आयोजनाका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट पाएको प्राधिकरणका प्रवक्तासमेत रहेका क्षेत्रीले बताए ।
६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख लागतको भैरहवा विमानस्थल निर्माणको काम २१ डिसेम्बर २०१४ बाट शुरु भएको हो ।
के-के काम बाँकी छन् अब ?
पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एसिएशन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले विमानस्थलको भौतिक संरचना निर्माणको काम सकेको छ । धावनमार्ग, टर्मिनल भवनसहितका संरचना बनेर यन्त्र-उपकरण जडानको काम जारी छ ।
संरचना बन्दैमा विमानस्थलको काम सकिन्न
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनका लागि भौतिक संरचना निर्माणले मात्र पुग्दैन । हरेक सरोकारवाला निकायले कर्मचारी व्यवस्थापनको काम मिलाउनुपर्छ । पर्यटन मन्त्रालय मातहतको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसहित सुरक्षाकर्मी, अध्यागमन, भन्सारले आफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गतको संरचना विमानस्थलमा खडा गर्नुपर्छ ।
ग्राउण्ड हृयाण्डिलिङ अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । सोही क्रममा प्राधिकरणले ५६ जना कर्मचारी रहने गरी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । यसअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनको काम बाँकी छ । नयाँ विमानस्थलमा एयरलाइन्स कम्पनीहरुले सेवा थाल्नअघि मार्केटिङ तथा प्रचार प्रसारको काम गर्छन् । सरकारले व्यवसायिकरुपमा विमानस्थल संचालनको मिति तोक्न नसक्दा एयरलाइन्सहरुले बजारीकरण थाल्न सकेका छैनन् ।
भारतसँग सम्झौता कहिले ?
भैरहवा विमानस्थल नेपाल-भारत सीमा नजिक छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाजले भारतीय आकास छुन सक्ने अवस्थामा छुट्टाछुट्टै अनुमति लिनुपर्छ । यसले गर्दा हरेक उडान प्रभावित हुन सक्छ । यसकारण, विमानस्थल संचालनमा आउनु अगाडि नै उडानबारे नेपाल-भारत सम्झौता भइसक्नु पर्छ ।
प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक क्षेत्रीका अनुसार भैरहवा विमानस्थल संचालन सम्बन्धमा पठाएको पत्रको सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । अब आपसी छलफल गरी सम्झौताको मिति तय गरिने उनले जानकारी दिए ।